लकडाउनले निन्द्रा लथालिंग ! - नेपालबहस
लकडाउनले निन्द्रा लथालिंग !
| २१:१०:३२ मा प्रकाशित
२८ चैत्र, काठमाडौं । अहिले लकडाउन छ । लकडाउनकै कारण घरमै बस्नुपर्ने बाध्यता छ । दिन रात काम नभएपछि मानिसहरु घरमै बसिरहेका छन । काम नभएपछि खाने, बस्ने र सुत्ने मात्रै भइरहेको पनि छ । पहिले पहिले दिनभरी अफिस हुन्थ्यो । तर अहिले दिनभरी कामै बस्ने र सुत्ने मात्रै भइरहेको छ ।
दिनभरी सुत्ने भएपछि रातमा धेरैलाई निन्द्रा नलाग्ने समस्या बढेको छ । निन्द्रा नलाग्ने समस्यालाई ‘इन्सोम्निया’ भनिन्छ । अहिले धेरैलाई यो समस्या छ । अहिले निन्द्राको समय तालिका तलमाथि भएमा भोलि ठूलो रोगको जोखिम पनि बढ्न सक्ने हुन्छ । अनिद्रा भइराखे डिप्रेशन र एन्जाइटी बढ्न सक्ने डाक्टरहरुको भनाई छ ।
सुत्ने समयको चाँजापाँजो धेरैको गडबड नै छ । अन्य दिनमा हामी जसरी नियमित सुत्ने र उठ्ने तालिका बनाइएको थियौ । त्यो अहिले लथालिंग भएको छ । बिहानै उठ्नेहरु अहिले ९ देखि १० बजेतिर उठ्छन । अबेर उठ्नेहरु अचेल दिउँसो १२ बजेदेखि १ बजेतिर उठ्ने गर्छन । त्यसमाथि खाने, सुत्ने, बस्ने र मोबाइल चलाउने मात्रै दैनिकी छ ।
यस्ता रोग लाग्न सक्छन !
यस्तो अस्तव्यस्त दैनिकीले मधुमेहको जोखिम बढाइदिन्छ । उच्च रक्तचाप जस्ता दीर्घ रोग लाग्ने संभावना धेरै हुने डाक्टरको भनाई छ । यस्तो बेला खानपानमा ध्यान नदिदा मोटोपन र मुटु रोगको समेत बढ्न सक्छ । यस्तै शरीरमा ग्लूकोज राती न्युन स्तरमा रहने गर्छ । तर, ढिला गरी सुत्ने व्यक्तिहरु राती खानेकुरा, मदिरा, चिया, कफीको तलतल लाग्छ ।
केही न केही खान्छन् । यसरी खानाको कारण रगतमा ग्लुकोजको स्तर बढ्न पुग्छ । यसले टाइप २ मधुमेह हुने जोखिम बढ्छ । राती अबेरसम्म बस्ने । बिहान ढिलो उठ्ने । यसले खानपान शैली नराम्ररी प्रभावित हुन्छ । कतिबेला खाने भन्ने टुंगो हुँदैन ।
यसरी शरीरको आवश्यक्ता अनुरुप खानपान तालिका मिल्दैन । यसले शारीरिक कमजोरी र रोग निम्त्याउँछ । विहान अवेरसम्म सुत्नुको असर दिमाग तथा हर्मोनमा समेत पर्ने गर्छ । यसले चिन्ता र दुःखको भाव गराउँछ । यस्तै उनीहरुमा छटपटी र बेचैनी समेत पैदा हुन्छ ।
ताप्लेजुङको ९५ प्रतिशत भूभागमा मोबाइल सेवा सञ्चालन १ महिना पहिले
मोबाइल चार्ज गर्दा ध्यान दिनुपर्ने ५ कुरा ४ महिना पहिले
अब जे चाहिन्छ फटाफट पाइन्छ, १० प्रतिशत कर फिर्तासँगै छुट माथि छुट अफर ४ महिना पहिले
शैतानी जुत्ताको बिक्री रोकियो ३ हप्ता पहिले
साढे दुई महिनादेखि बेपत्ता व्यक्ति मृत भेटिए ४ हप्ता पहिले
चितवनमा पशु ढुवानी गर्ने ३६ सवारीसाधन कारवाहीमा १ हप्ता पहिले
धनुषाका संक्रमित पुरुषको जनकपुरमा मृत्यु ८ महिना पहिले
मावारिद एक्सचेञ्जबाट पैसा पठाउँदा आइफोन र टिभी उपहार १ वर्ष पहिले
फलहरूको राजा आँप, ‘अल्टरनेट बियरिङ’ का कारण कम उत्पादन १० महिना पहिले
के तपाई आईपीओमा लगानी गर्न चाहानुहुन्छ ? ६ अर्ब ३९ करोडको साधारण शेयर आउँदै छ ! ३ महिना पहिले